Bafuna incazelo eMsunduzi TVET | News24
Bafuna incazelo eMsunduzi TVET
PHOTO: nokuthula khanyileKuphazamisekile ukufunda eMsunduzi TVET College ngoLwesibili.
BAFUNGA bayagomela abafundi baseMsunduzi TVET College ukuthi ngeke kuqhubeke ukufunda nokufundisa kulesikhungo kuze kube batshelwa ukuthi bayithola nini imali yonyaka wezimali ka 2016 evela kuNational Student’s Aid Scheme (Nsfas)okwakufanele bahlinzekwe ngayo.
Siqhubekile nangoLwesibili isiteleka salabafundi esesindonse amasonto amathathu emuva kokufika kwangqingetshe kwezingxoxo kwabamele abafundi i-SRC kanye neziphathimandla zalesikhungo.
Umengameli we-SRC, uSphume Mbanjwa uthe abafundi bafuna ubufakazi bokuthi lemali yacazwa kanjani ukuze bezobuyela emakilasini.
Uthe ngoLwesibili babe nezingxoxo emini neziphathimandla bezama ukuthi baxazulule isiteleka esisithikameze ukufunda.
UMbanjwa uthe abafundi baphoqeleke ukuthi badube amakilasi ngoba lokhu abakhala ngakho kuyabambeka futhi kuthinta ngqo abafundi ababamele kulesikhungo.
“Ziningi izinkinga ezikhona ngaphakathi kulesikhungo kodwa okukhulu okwemali yabafundi yangonyaka ka 2016 namanje engakafiki kubona futhi esingatholi kucaciseleka ngayo.”
Uthe lemali yakhishwa u-Nsfas kodwa namanje abafundi abakaze bayithole. Lemali uthe iyona ekwazi ukuhlangabezana nezidingo zabafundi iphinde ikhokhele nezindawo zabo zokuhlala.
“Wonke amanye ama-TVET College aseyitholile lemali acazela abafundi ngendlela inkinga isisele noMsunduzi kuphela. Abafundi bethu bayakhishwa ezindaweni abaqashe kuzo ngoba bengenayo imali yokukhokha kodwa ibe yakhishwa kwa-Nsfas.”
Uthe kulabo bafundi abayithola lemali yayingaphelele nokuyinto okwakungazange kuvunyelwane ngayo.
“Kukhona abafundi abathola imali engango R15 abanye oR30 bemali yokugibela inyanga yonke nokungawenzi umqondo. Umfundi angagibela kanjani ngemali encane kanje inyanga yonke.”
UMbanjwa uthe lokhu kuyahlupha ngoba kuba nomthelela ekutheni abafundi bagcine bengazanga esikoleni.
“Isikhungo sigunyaza ukuthi abafundi beze esikoleni izinsuku ezithile ngonyaka ukuze bahlinzekwe ngalemali kodwa lokhu kugcina kungenzekanga ngoba kwayona lemali abayitholi.”
Okunye athe kuphethe kabi abafundi ukuthi njengoba kuqhubeka isiteleka abakwazi ukubhala nezivivinyo zabo.
“Kusele izinsuku ezingu ezingu 21 kuqale izivivinyo zokuphela kwekota yonyaka. Izivivinyo ezandulela lezi zokuphela kwekota nazo abakwazanga ukuzibhala njengoba kutelekiwe.”
Uma sesiphelile isiteleka uthe abafundi bazobhekana nengcindezi yomsebenzi wesikole.
“Lokhu kuyasikhathaza kakhulu ngoba usuku lwezivivinyo alukwazi ukuhlehla lumile njengokomyalelo womnyango wezeMfundo ePhakame kanti muningi nomsebenzi osahlalele aba- fundi.”
Umfundi okhulume naleliphephandaba uthe okuxakayo ukuthi kufanele basayinde ezinye izinkontileka zokuthola imali ngoMeyi.
“Akukwazi ukuthi singasayiniswa izinkontileka ezintsha kodwa imali yango 2016 singakaze siyithole. Lento abayenzayo ibuhlungu ngoba kunabanye abafundi asebeshiyile nasesikoleni ngoba imali bengenayo.”
Izolo uMbanjwa uthe emuva komhlangano wabo neziphathimandla zesikhungo banqume ukuthi abafundi babuyele emakilasini ukuze babhale izivivinyo zabo.
“Ngicele ukuthi banginike yonke imininingwane yabafundi nokuthi bebeza kangaki esikoleni okunomthelela kulemali abahlinzekwe ngayo.
Sizobe sesibona ukuthi loludaba siyaphi nalo uma sesithole lemininingwane.”